Yongeza izichazi kwiVidiyo yakho yeYouTube | Martech Zone
Yongeza iiNkcazo kwiiVidiyo zakho zeYouTube
NgoLwesibini, Meyi 21, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Uninzi lwamashishini lufaka iividiyo kwi Youtube kodwa musa ukusebenzisa ithuba yokwandisa ividiyo yabo okanye ukongeza izichasiselo. Ngezichazi-magama ungabeka umaleko wokubhaliweyo, amakhonkco kunye neendawo ezineendawo ekuhlala kuzo ividiyo yakho. Izichazi ziyakuvumela ukongeza ulwazi, unxibelelwano kunye nokuzibandakanya. Kumashishini, oku kuthetha ukuba ungawangxolisa umnxeba-kwinyathelo ngqo kwividiyo-ukongeza ikhonkco ubuyisele kwidemo, ukhuphelo okanye ubhaliso.
Izichazi azibonisi nje kwiYouTube, zikwaboniswa nakowuphi na umdlali obekiweyo. Ubuncinci, kuya kufuneka wongeze isichaso ukuze ucele ababukeli babhalisele ijelo lakho le-YouTube!
Zintlanu iintlobo ezahlukeneyo zezichazi-magama onokukhetha kuzo:
Iqamza lentetho yenza amaqamza entetho ezivelelayo ngombhalo.
Ukubonakala -Qaqambisa iindawo kwividiyo; xa umsebenzisi ehambisa imouse kwezi ndawo isicatshulwa osifakayo siya kuvela.
Phawula -Yila iibhokisi ezivelelayo ezinombhalo.
isihloko -Yenza isicatshulwa ukuba ubambe ividiyo yakho.
Label -Yila ileyibheli yokubiza kunye negama levidiyo ethile.
Amanqaku, i-Speech Bubbles kunye ne-Spotlights, zinokudibaniswa "nomxholo" ofana nezinye iividiyo, ividiyo efanayo, iphepha lesitishi, uluhlu lokudlala, iziphumo zophando. Kwangokunjalo, banokudityaniswa "neefowuni zokwenza into" ezinje ngokurhuma, bhala umyalezo kwaye ulayishe impendulo yevidiyo. Jonga ibhokisi "Qhagamshela" phantsi koseto "lokuQala" kunye no "Phelisa". Unokukhetha ukuba uyafuna na ukuba isichaso sidibanise enye ividiyo, ijelo lakho, okanye ikhonkco elingaphandle.
Kwezinye iingcebiso eziphambili ekusebenziseni izichazi ze-Youtube -Ndwendwela iphepha labo lenkxaso ngesihloko. Ukunyusa ngokwenene i-YouTube, jonga Incwadi Yomdlalo bakhulile!
tags: Iinkcazo ze-youtubeileyibhile ye-youtubeIsichasiselo sekhonkco se-youtubeInqaku le-youtubeIbhola yentetho ye-youtubeUkukhanya kwe-youtubeisihloko se-youtube
Lungisa ii-imeyile eziPhendulayo eziSelfowuni
Meyi 22, 2013 kwi-4: 30 AM
Ndicinga ukuba iluncedo KAKHULU. enkosi!